Displaying items by tag: cele news - Celebrities 8DaysaWeek - Journal
Published in Cele News
အဆောင်ဇာတ်ကားလေးမှာ ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ ညီမတို့ Miss အသစ်တွေပဲ အကုန်ပါထား တယ်။ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း အသစ်ကလေးတွေကို မြင်ရမှာပါ။ အားလုံးက မတူတဲ့ကာရိုက်တာ ဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့ ပါထားကြ တယ်။
အတုဆိုရင် ဆီလီကွန် ထည့်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို မြင်တယ်
Q . Hero နဲ့ Zero .....
A . ံHero ဆိုတာ ကိုယ်သ ဘောကျတဲ့ Hero ဖြစ်တဲ့သူ။ Zero ဆိုတာကတော့ ဟိုးအောက်ဆုံးမှာ ပေါ့။
ရှစ်တန်းကျောင်းသူဘဝမှာ ကောင်လေးတွေက ချောလို့ပျော် တယ်
လူတိုင်း ဆယ်ကျော်သက်ဘဝ၊ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြဖူးမှာပါ။ ကိုယ်ဖြတ် သန်းခဲ့ရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာ ဘယ်လိုအမှတ်တရမျိုးတွေ ရှိခဲ့ဖူး လဲ၊ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ Cele Teen Life လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါ တယ်။
ဆယ်တန်းမှာ ဘာသာစုံဂုဏ် ထူးပါရင် မေမေက ရုပ်ရှင်ထုတ် ရိုက်ပေးမယ် ပြောခဲ့တယ် - ပိုင်ဖြိုးသု
မီ ဇာတ်ကားကို မိုးကုတ်မှာ လည်း ပြနေပါတယ်။ သုသုတော့ သေချာမသိဘူး။ Production ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လာတာဆို တော့ မေမေနဲ့ ကိုဏကြီးသိတယ်။ သုသု မသိဘူး။ သုသုနဲ့ ကိုဏကြီး လည်း နောက်ထပ်ရိုက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ စရိုက်ပြီဆိုရင် ပြောပါ့မယ်။